Iyini indima yekhaya elihle ekhaya?
Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, imikhiqizo ehlakaniphile ibathuli ekhaya ukuze inikeze usizo lwabantu futhi sawubona ...
Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, imikhiqizo ehlakaniphile ibathuli ekhaya ukuzonikeza lula abantu's service kanye nekhwalithi ephezulu yempilo. Esikhathini esanda kuqalwa, ikhaya elihlakaniphile selisetshenziswe kabanzi, lilethe ukuphuculwa okuningi futhi liguqule ngempilo yakho kanye nami impilo. ini's inzuzo kanye nomsebenzi womqondo wempilo ohlakaniphile wokuphila? Ake sikuhlaziyele.
MayelanaUkuphepha Kwasekhaya, faka abathengi futhi usebenzise i-Smart Home to Real Time Monitor Imvelo yemvelo, ungabuka ukuphepha kwemvelo yasekhaya nge-Remote Monitor, kungaqapha umnyango nefasitela ngokufaka izimo zasekhaya, futhi ungazifakauhlelo lwe-alamu, kunganciphisa ukulahleka kokuphansi kanye nezinkinga zokuphepha, ngaphezu kwalokho, uma ufakeI-Smart Lock, Noma ngabe ukushintshwa kwamandla nokusebenza okuqondile, hhayi kuphela kuphela kungasebenza ngokulawulwa okukude, futhi kunganciphisa inkinga yezokuphepha ngenxa yokukhohlwa amandla okushintsha amandla.
Ngasikhathi sinye, uma oncanyana noma izisebenzi zekhola ezimhlophe zifuna ukwengeza ukumangala ngempilo yabo futhi zibe nesipiliyoni sokuzijabulisa esingcono, ngakho-ke zingathuthukisa okuhlangenwe nakho kwezokuzijabulisa ngokufaka futhi zithuthukise isibani sasekhaya ngokulungisa ukukhanya okukhanyayo Noma kumnyama, ukwenza ikhaya lakho lifudumele, akuwona wonke amathuba ekhaya elihle, ungangeza isipiliyoni sokuzijabulisa sempilo ngomculo wangemuva, ukuze abantu bangene emvelweni enhle yokuphila enethezekile.
Ngaphezu kwalokho, i-Intelligent Operation Mode ingenye yekhaya elihlakaniphile, nalapha lizoba nendoda endala emndenini wethu, asebekhulile abanokuhamba okulinganiselwe, uma bezodinga ukusukuma ukuze bashintshe ukunikezwa kwamandla, kunzima kakhulu . Uma kunomkhiqizo wasekhaya ohlakaniphile, ukuze akwazi ukulawula konke ukusetshenziselwa ukukhanya nokusebenza kukagesi ngokulawula okukude, noma ngabe ahlala kusofa noma ahlala embhedeni, lapho kukhanya ucingo luzokhanya uma kufika ocingweni, ukukhumbuza ucingo .
Emindenini enezingane, theIkhaya elihlakaniphile Udlale indima embaxambili yokuvikelwa nokuphatha, okokuqala, uma kufanele ubeke ingane ikhaya ekhaya, abazali bangayibona ingane'IMISEBENZI ESEKHAYA NGOKUKHANYA KWAMAHHALA SAMAHHALA, ngakho-ke abazali bangavikela izingane ezingozini.
Ngemikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile kakhulu ekhaya, abasebenzisi abakwazi ukumane balawule imikhiqizo ekude, kodwa futhi bangasebenzisa lolu hlelo ukuzokhonza umndeni wakho, ukuze bakwazi ukuhlala endaweni elula, enethezekile futhi ephephile futhi bathuthukise ikhwalithi yempilo.
PHAMBI Uhlelo lokuqashelwa kobuso luvule i- "Brush Face Redraway" Times "
Isitolo sezinto ezifinyeleleka kalula, izitayela ezintsha embonini yezitolo OLANDELAYO